GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
NDỤ Jizọs biri n’ụwa ọ̀ bara uru n’eziokwu? Nne na nna ya bụ ndị ogbenye. O nwekwanụghị mgbe ọ bara ọgaranya n’oge niile ọ nọrọ n’ụwa. O kwudịrị na ya “enweghị ebe ọ bụla ọ ga-atọgbọ isi ya.” (Luk 9:57, 58) Ihe ọzọkwa bụ na ndị iro ya kpọrọ ya asị, kwutọọ ya ma mechaa gbuo ya.
Mmadụ nwere ike iche na ‘ndụ ahụ ọ dịrị enweghị uru ọ bara.’ Ma e nwere ihe ndị ọzọ mere ná ndụ Jizọs anyị kwesịrị ichebara echiche. Ka anyị leba anya n’anọ n’ime ha.
1. JIZỌS MERE UCHE CHINEKE.
“Ihe oriri m bụ ka m mee uche onye zitere m, ka m rụchaa ọrụ ya.”—Jọn 4:34.
Ma n’okwu ọnụ ya ma n’omume ya, Jizọs mere uche Nna ya nke eluigwe, bụ́ Jehova. * Ime uche Chineke tọrọ ya ezigbo ụtọ. Amaokwu Baịbụl a e dere n’elu gosiri na o jidị ime uche Nna ya tụnyere ihe oriri. Olee mgbe o kwuru ihe a?
Ọ bụ n’ehihie ka Jizọs kwuru ya. (Jọn 4:6) N’ụtụtụ ụbọchị ahụ, o ji ụkwụ ruo obodo Sameria. Obodo a bụ ugwu ugwu, n’ihi ya, o doro anya na agụụ ji ya n’ehihie ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya gwadịrị ya, sị: “Rabaị, rienụ ihe.” (Jọn 4:31) Ihe Jizọs gwara ha gosiri na ịrụ ọrụ Chineke na-eme ka afọ ju ya, na-emekwa ka o nweta ume. Ihe a Jizọs kwuru ọ̀ dara gị ka ihe nwoke ndụ ya na-enweghị isi ga-ekwu?
2. JIZỌS HỤRỤ NNA YA N’ANYA.
“M hụrụ Nna m n’anya.”—Jọn 14:31.
Jizọs na Nna ya nke eluigwe dị n’ezigbo mma. Otú Jizọs si hụ Chineke n’anya mere ka o mee ka ndị mmadụ mata Nna ya. Ọ kụziiri ha aha Nna ya, uche ya, na àgwà ya. Ihe ndị Jizọs kwuru, ihe ndị o mere, na otú o si kpaa àgwà gosiri nnọọ ụdị onye Nna ya bụ nke na mgbe anyị na-agụ akụkọ Jizọs, ọ na-adị anyị ka ànyị na-agụ akụkọ Nna ya. Ọ bụ ya mere na mgbe Filip gwara Jizọs, sị: “Gosi anyị Nna ahụ,” ihe Jizọs gwara ya bụ: “Onye hụrụ m ahụwokwa Nna m.”—Jọn 14:8, 9.
Jizọs hụrụ Nna ya n’anya nke na o rubeere ya isi ruo ọnwụ. (Ndị Filipaị 2:7, 8; 1 Jọn 5:3) Otú ahụ Jizọs si hụ Chineke n’anya mere ka ndụ ya baa ezigbo uru.
3. JIZỌS HỤRỤ NDỊ MMADỤ N’ANYA.
“Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya karịrị nke a, na mmadụ ga-atọgbọ mkpụrụ obi ya n’ihi ndị enyi ya.”—Jọn 15:13.
Ebe anyị bụ ndị na-ezughị okè, anyị enweghị olileanya ịdị ndụ n’ọdịnihu. Baịbụl kwuru, sị: “Mmehie si n’aka otu mmadụ bata n’ụwa, ọnwụ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile n’ihi na ha niile mehiere.” (Ndị Rom 5:12) Ebe mmehie na-eweta ọnwụ, anyị agaghị agbatali ọnwụ n’ọsọ.—Ndị Rom 6:23.
Ma obi dị anyị ụtọ na Jehova emeela ka e nwee ihe ga-eme ka a napụta anyị n’aka ọnwụ. O kwere ka Ọkpara ya zuru okè, nke na-enweghịkwa mmehie, taa ahụhụ ma nwụọ ka o wee gbapụta ụmụ mmadụ n’aka mmehie na ọnwụ. Ebe Jizọs hụrụ Nna ya na ụmụ mmadụ n’anya, o ji obi ya dum kweta ịnwụ maka anyị. (Ndị Rom 5:6-8) Otú a Jizọs si hụ Nna ya na ụmụ mmadụ n’anya mere ka ndụ ya baa uru. *
4. JIZỌS MA NA NNA YA HỤRỤ YA N’ANYA.
“Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye ihe ya masịrị m.”—Matiu 3:17.
Jehova si n’eluigwe kwuo ihe a n’oge e mere Jizọs baptizim. Jehova si otú a mee ka ụwa mata na ọ hụrụ Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, n’anya. Ọ bụ ya mere Jizọs ji kwuo hoo haa, sị: ‘Nna m hụrụ m n’anya.’ (Jọn 10:17) Jizọs diri mmegide e megidere ya na mkparị niile a kparịrị ya maka na o doro ya anya na ihe ọ na-eme masịrị Nna ya nakwa na Nna ya hụrụ ya n’anya. Nke a mekwara ka ụjọ ghara ịtụ ya ma ọ bụ ka obi ghara ịlọ ya mmiri mgbe ọ na-aga ịnwụ. (Jọn 10:18) O doro anya na ihe mere ndụ Jizọs ji baa ezigbo uru bụ na ọ ma na Nna ya hụrụ ya n’anya.
N’eziokwu, ndụ Jizọs dịrị n’ụwa bara ezigbo uru. O doro anya na e nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta n’aka ya banyere otú ndụ anyị ga-esi baa uru. Isiokwu na-eso nke a ga-eleba anya na ndụmọdụ Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya banyere otú ha kwesịrị isi na-ebi ndụ.
^ para. 15 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere uru àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ bara, gụọ isi nke 5 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.